Ungazilungisa njani iigi zakho
ngomphathi ku 21-10-08
Ukuba ukufumanisa kunzima ukukhetha amagiya ibhayisekile yakho ye-Insync inokufuna uhlengahlengiso oluthile Beka i-lever yegiya kwizixhobo eziphezulu, jika iipedali kwaye uvumele ikhonkco ukuba liye kwelona cog lincinci lincinci ngasemva kwebhayisekile. Ukuba kukho isixhobo sokulungisa intambo kumzimba we-lever yegiya, okanye kumzimba we-derailleur, yijije ...
ngomphathi ku 21-09-30
Ngena kwibhayisikile yakho entsha yombane uhambe uyokuqhuba. Ngumbono olungileyo ukwenza ezinye iitshekhi ngaphambi kohambo ngalunye. Qinisekisa ukuba yonke into iqinile! I-Wheel nut okanye ikham yokukhupha ngokukhawuleza. Qinisekisa ukuba isali kunye neempondo ziqinile kwaye ukuphakama kufanelekile kuwe. Jonga ukuba indawo yokubamba ijikeleza f ...
Ukugcina i-Lubed Up
Ibhayisekile yakho ifuna ukuthambisa rhoqo ukunceda ukuba iqhubeke kakuhle kwaye inciphise ukunxiba kwezinto. Okokuqala, ngaphambi kokufaka izinto zokuthambisa, kufuneka uhlambe ibhayisekile yakho yombane kwaye ugcine ibhayisekile yombane icocekile. Xa kuziwa ekuthambiseni, eyona nto ibaluleke kakhulu kukudibanisa. Ukuba uziva womile ...
Siza ukuya 30 CHINA CYCLE BONISA ngo-2021
Siza kuya 30 CHINA CYCLE BONISA ngo-2021, umnquba wethu Inombolo D1323, Sithatha iimodeli ezintsha elinanye ukuya show, Vistors Wamkelekile uze ujonge imifuziselo zethu ezintsha. Siqinisekile ukuba ezo modeli zintsha zinikezelwe kwaye ziyamangalisa ziya kukwenza uzive womelele ngokwenene amandla e-R & D phakathi kweqela lethu.